Kuphi sesiyinikeza TV ubudala? Lapho ungabeka TV
Kuphi sesiyinikeza TV ubudala? Manje sizama ukuqonda lo mbuzo. Kukhona izinketho ezimbalwa ezihlukene.
Sekuyisikhathi eside i-TV kwaba imfanelo esiyisibopho yokuzilibazisa abantu emhlabeni wonke. Lolu hlobo ubuchwepheshe akuvamile ngakho ehluleka. Kodwa abaningi kukhona onobuhle ngcono emhlabeni ukuthi kungcono nokuningi practical. Ngokuvamile kwenzeka ukuthi lolu hlobo zasendlini kudingeka ukushintshwa ngenxa zokugwema ukuphuka noma ubudala, noma ngenxa isifiso ukushintsha enguqulweni okuthuthukile. Kuphi sesiyinikeza TV ubudala? Okufanele ukwenze naye, ukuze ngingasebenzisi lokulimaza imvelo?
Eqinisweni, kukhona izinketho eziningi ukuze kudlule lapho TV ubudala, okuyinto, ngaphezu ukuqeda ezingadingekile zasendlini, ngisho ukuletha imali ezincane zithobekile.
Okokuqala, kudingeka ucabangele inketho ngokubeka ehhovisi ekhethekile. Benza yokwamukela TV ubudala kabusha. amafemu ezinjalo zenziwa ukuthatha amadivayisi futhi adiliza wabayisa izingxenye. Ezinye izingxenye asetshenziselwa ukulungiswa.
Abanye ezivumelekile ukucubungula. By the way, ukuthenga TV amadala ukwenza amafemu enkulu nje kuphela kodwa futhi workshop ezincane. abanikazi ngobuhlakani lezi Amahhovisi kungaba zisuswe futhi asetshenziswe ukukhanda zonke izingxenye zomzimba TV ubudala.
Kuphi sesiyinikeza TV ubudala? Kukhona inkonzo ezifana kabusha. Kuthatha indawo izigaba ezimbalwa workshop phezu Ukwamukelwa endlu Imishini. Okokuqala, master ukususa zonke izinto zenani elikhulu. Khona-ke ahlukanisa ingxenye esele futhi sathunyelwa kabusha. izindlu Plastic Incibilikile phansi insimbi ingilazi izingxenye ukugaya ukusetshenziswa eminye e imboni lehlanganisa tinhlelo. Futhi ngakho-ke kwenzeka kabusha ama-TV.
Kuphi nginikeze idivayisi CRT emzimbeni? TV amasethi okunjalo Yiqiniso, zikhona sazikhohlwa, kodwa futhi athathe kabusha ngokusebenzisa kabusha. Phela, nabo basuke izinto okuningi eyenziwe amatshe ayigugu. Igolide nesiliva yezingxenye isetshenziswa ukwenza izingxenye ezintsha zikagesi, izingcingo noma amakhompyutha. izinsimbi Idoyelo kuthiwa kwancibilika. A okucaciswe luketshezi izikrini esetshenziswa enkulu ekwakhekeni imishini yesimanje nasezintweni zobuchwepheshe zamuva.
Ukuthenga TV - uhlobo lalivamile zebhizinisi. Ngakho-ke, ngisho edolobheni elincane, ungakwazi ukuthola kalula endaweni ukuthumela kudivayisi yabo.
Inani elikhulu amafemu for kabusha zikagesi ezindala ukukhangisa ku endaweni wendawo. Ngokubiza le nombolo, ungamazi ngokugcwele zonke nemibandela kabusha TV ubudala futhi oda amakhosi ngesikhathi esilungele. Inkampani Uyothatha inqubo ngosizo abasebenzi babo. Ngesikhathi esifanayo futhi kususwelwe udoti. Le ndlela kabusha TV ubudala ingcono kakhulu yokusiza abantu bahlukane nazo zasendlini ngezandla zabo.
Nikeza kulelo khaya lezintandane
Lapho ungakwazi uphonsa TV ubudala? Mhlawumbe kufanele sibanikeze ekhaya yezingane noma ekhaya lasebekhulile. Ngokuvamile izinhlangano ezinjalo kukhona ukuntuleka zasendlini. Ngakho izakhamuzi zalezi amakhaya uyojabula isipho esinjalo. Nokho, kuwufanele ukukhumbula ukuthi ngokunikeza TV isikhungo kamasipala, kumele ncamashi uqinisekile sokufaneleka yayo kanye ubuqotho nathi.
Anyone into ukusebenzisa leso sikhungo, unesibopho ke. Yiqiniso, izinzuzo zalesi indlela kulahlwa ngeke uthole, futhi ukulethwa kuyodingeka wenze bebodwa, kodwa indlela enhle ukujabulisa abantu ubudala ababona okuhle kancane empilweni.
Exchange of imishini ezingadingekile entsha
TV Old kodwa ukusebenza anganika isendalini in the pawnshop. Lokhu kuveza esincane sebheyili. lisebenze izitolo eziningi benze izimanga uma kukhona ukushintshana zikagesi ubudala nomunye entsha. Ake izinzuzo ukuthenga abakutholanga, kodwa inkinga ngokukhululwa uzonyamalala ngokwalo. Kuphi nginikeze i ithelevishini ubudala esenana entsha? Imishini esitolo. Ngasiphi? Lokhu kungabonakala kusukela izikhangiso. Isikhathi esining impela, izitolo benze izimanga ezinjalo. By endleleni, abaningi babo, ngaphezu bashintshisane imishini ubudala abe nenguqulo entsha, uzihlanganisa kakhudlwana futhi khulula lokuthumela kudivayisi ubudala indawo eyamukelayo. Futhi lokhu kungenziwa kubhekwe inzuzo encane.
Ukuthengisa isikhangiso ubuchwepheshe
Kuphi nginikeze i ithelevishini ubudala, uma namanje ukuze ukusebenza? Singasho zithengiswa ku isikhangiso. Khona-ke qiniseka ukuthi ngeke khona labo abayobona ufuna ukuthenga i-TV ukuze ekotishi noma ekhaya.
Ngokuvamile imishini enjalo ngentengo ephansi babe abafundi noma imindeni abasha. Futhi nje iqembu labantu abasha abahlala efulethini elilodwa lapho ngokuchichima encane, bajabule ukuthola leli thuluzi ukuze bazisebenzise.
Manje uyazi ukuthi kudlule lapho TV ubudala. Krasnoyarsk njengoba omunye muzi ogcwele amafemu okuyinto ukuthenga inqubo ubudala. Ngokwesibonelo, kuleli dolobha kukhona Region Util Centre, «Eco Monitoring" LLC nabanye.
Umgundi wotshani noma kusilungisi - Ukukhetha umthetho
Beldibi Santana Ihhotela 3 - iholide kakhulu e-Turkey
Kuyini "Blah Blah imoto"?